Nagu saabsan - Hainan Huayan Collagen Technology Co., Ltd.
Waxaa la aasaasay bishii Julaay 2005, Hainan Huayan Collagen Technology Co., Ltd. waa shirkad farsamo heer sare ah oo heer qaran ah oo isku dhafan cilmi baarista wax soo saarka iyo horumarinta, wax soo saarka iyo iibinta, iyada oo la diiwaan geliyay raasamaal dhan 22 milyan oo yuan. Xarunteedu waxay ku taal Haikou, Hainan. Shirkaddu waxay leedahay xarunta R & D iyo shaybaarka muhiimka ah ee ku dhowaad 1,000 mitir murabac, hadda waxay leedahay in ka badan 40 shatiyada, 20 heerar shirkadeed iyo 10 nidaamyo wax soo saar oo dhameystiran. Shirkadda ayaa maalgelisay ku dhowaad 100 milyan oo yuan si ay u dhisto saldhigga ugu weyn ee warshadeynta kalluunka loo yaqaan 'pepeide collagen' ee Aasiya, iyadoo leh wax soo saar ka badan 4,000 tan. Waa shirkaddii ugu horraysay ee gudaha ka hawlgasha soo saarista koronto-galeenka kolajka leh iyo shirkaddii ugu horreysay ee ay ku jirtay liisanka wax soo saarka ee kalluunka loo yaqaan 'collagen peptide' ee Shiinaha.
Shirkadda ayaa si isdaba joog ah u dhaaftay shahaadooyin badan sida ISO45001, ISO9001, ISO22000, SGS, HACCP, HALAL, MUI HALAL iyo FDA. Wax soo saarkayagu wuxuu buuxiyaa shuruudaha WHO iyo heerarka qaranka, inta badan loo dhoofiyo Europe, America, Australia, Russia, Japan, South Korea, Singapore, Thailand iyo qaar ka mid ah waddamada iyo gobollada ku yaal Koonfur-bari Aasiya.
In ka badan 15 sano ee la soo dhaafay, dhammaan asxaabteena shirkadda waxay si joogto ah ugu hoggaansameen ujeedada ka go'naanta ganacsiga kolajka iyo u adeegidda caafimaadka aadanaha, si joogto ah u baaraya una horumarinaya, u cusbooneysiineysa una hagaajineysa habka wax soo saarka, qaadashada heerkulka heerkulka hooseeya ee enzymatic hydrolysis, hooseeya fiirsashada heerkulka iyo habka wax soo saarka kale ee horumarsan, kaas oo si isdaba joog ah u bilaabay kalluunka loo yaqaan 'collagen peptide', 'peystide' oyster peptide, peptide peapide pecumide, walnut peptide, soybean peptide, pea peptide, iyo xayawaan kale oo yar-yar-yar iyo dhirta peptides bayoloji ahaan firfircoon. Wax soo saarka ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa dhammaan noocyada beeraha sida cuntada, qurxinta iyo dawooyinka.
Qaabka Iskaashiga Macaamiisha iyo Adeegga
Marka loo eego qaabka hay'adda aasaasiga ah iyo qaybinta labaad
Milkiilayaasha Nooca Horumarinta
Bixiyaan qaaciidooyinka iyo hirgelinta xalalka wax ku oolka ah
(gudbinta alaabta ceyriinka ah)
in la dhiso iskaashi istiraatiijiyadeed oo muddo dheer ah iyo is oggolaansho
Wax soo saarka ayaa loo qaybiyaa iyadoo loo eegayo waxtarkooda bayooloji si loo daboolo baahiyaha dadka kala duwan iyo qaybaha wax soo saarka kala duwan.
Waxsoosaar tayo sare leh oo xasilloon oo xayawaan ah iyo dhirta peptide wax soo saarka ayaa dabooli kara baahida shaqsiyeed ee nafaqada leh, cuntada caafimaadka, miisaanka oo yaraada, alaabada bayoolojiga, alaabada dawooyinka iyo warshadaha qurxinta.
Bishii Luulyo 2005, ayaa la aasaasay Hainan Huayan Biotech Co., Ltd.
Bishii Luulyo 2006, ayaa la aasaasay geedkii ugu horreeyay ee xirfadlayaal ah ee kalluunka kalluunka.
Bishii Oktoobar 2007, ayaa loo dhoofiyey qaybtii ugu horreysay ee badeecooyin leh xuquuq madax-bannaan oo aqooneed oo loo diro Japan, Mareykanka, Malaysia, Thailand, New zealand, Australia iyo dalal kale.
Bishii Sebtembar 2009, oo loo siiyay "Hainan Top Ten Brand Enterprises" oo ay bixisay Guddiga Macaamiisha Gobolka Hainan.
Bishii Luulyo 2011, ayaa si wada jir ah loogu abaal-mariyey "Waaxda Tikniyoolajiyadda Casriga ah ee Toban Waaxood, sida Warshadaha Gobolka iyo Maamulka Warfaafinta, Waaxda Kalluumeysiga ee Gobolka, Dowladda Hoose ee Haikou.
Bishii Maarso 2012, oo si wada jir ah loogu siiyay "Top Ten Top Scientific and Technological Innovation Units" oo ay bixiyaan toban waaxood sida Waaxda Sayniska iyo Teknolojiyada ee Gobolka, Waaxda Warshadaha iyo Macluumaadka Teknolojiyada, Dowladda Hoose ee Haikou.
Bishii Meey 2012, waxaa laga gudbay ISO22000: Shahaadada Nidaamka Maareynta Amniga Cuntada ee 2005; ISO9001: Shahaadada Nidaamka Maareynta Tayada ee 2008.
Bishii Maajo 2013, "Mashruuca Warshadaynta Kalluunka Kalluunka" waxaa loo aqoonsaday inuu yahay mashruuc tiknoolajiyad sare ku leh Gobolka Hainan.
Bishii Diseembar 2014, ayaa heshiis maalgashi la saxeexday Haikou National Development Technology High Zone, oo ay maalgashi ku sameeyeen 98 milyan yuan si loo aasaaso Saldhigga Warshadaha ee Kalluunka.
Bishii Maajo 2016, oo lagu abaalmariyay "Qaybaha wax ku oolka ah ee Shiinaha ee Maareynta Caafimaadka".
Bishii Luulyo 2017, oo loo aqoonsaday "Mashruuca Qaran ee 13-ka sano ee hal-abuurka iyo soo-celinta badda" ee Wasaaradda Fiance iyo Maamulka Badweynta ee Gobolka.
Sannad-guuradii 40-aad ee dib-u-habeynta iyo furitaanka 2018, aniga oo ku hadlaya magaca shirkadaha caalamiga ah ee Shiinaha ee ku yaal shaashadda Mareykanka ee Nasdap ee Times Square ee New York.
Bishii Maajo 2019, waxaa lagu caddeeyay shahaadooyin caalami ah sida FDA iyo HALAL.
Bishii Meey 2020, waxaa sharaf u ah in lagu abaal mariyo Mashruuca Qaranka ee Ammaanta.